Ewubusuku bakho ... entwasahlobo - isibhakabhaka esibhakabhaka esibhakabhakeni, ilanga elikhanyayo, ukuqhuma kwezinyoni ze-sonorous kuyinto ejabulisayo futhi ejabulisayo. Futhi kubonakala sengathi ngenye ingozi yonyaka omusha ufika ebusika, hhayi kulezi zinsuku zasentwasahlobo, ngoba njengamanje ufuna ukwenza izifiso! Ngendlela, ungaphupha nanoma yiluphi usuku ukuthi umkhulelwe usugcwalisile, ungayenza noma yiliphi usuku. Uma ulandela imithetho elula, ngoba owesifazane oletha injabulo - iphupho lomuntu!
Present and win!
Ungamangali, kodwa iphupho lifana nesembatho esithandayo. Okokuqala uqala ukulinganisa, bese ucabanga ukuthi uzohlala kanjani ngokumangalisayo ngokulingana kwakho, futhi, ekugcineni, ngolunye usuku uzothola ingubo oyifunayo esitolo sakho ozithandayo. Ngakho ngephupho: okokuqala kufanele kudonswe, kufakwe imininingwane egcwele. Ungacabangi kakhulu ngesikhathi esisodwa: "Ngifuna ukuba ngowesifazane omuhle kunabo bonke", "Ngifuna i-ayisikhilimu", "Ngifuna usuku lomshado," "Ngifuna isendlo esisha" - gxila kwabathandekayo kakhulu futhi ucabange isithombe esifunayo. Futhi kungcono ukwakha iqoqo lamaphupho akho - unamathele ephepheni iphepha elikhanyayo lemagazini, elifana nalokho oye wacabanga. Nsuku zonke, jabulisa lo mdwebo owubuciko obuhle, ugeze ngamaphuzu amahle, ufeze iphupho liphile - emva kwakho konke, imicabango iyinto ebonakalayo. Asikho isikhathi sokudala? Vele uchaze iphupho ephepheni - kodwa ngokuqinisekile imininingwane enemibalabala, futhi qiniseka ukuthi ubhala imizwa eyovela lapho isifiso sakho sigcwaliseka.
Unkulunkulukazi abancane bayazi ngokuqinisekile, kungakhathaliseki ukuthi ucabanga kahle kangakanani iphupho lokuba ngowesifazane oletha injabulo, umuntu akakwazi ukwenza ngaphandle kokukholwa kwakhe. Kuyadingeka ukuthatha izinyathelo ekufisweni kwesifiso, futhi ngendlela okudingeka ngayo ukuhlanganisa amnandi newusizo. Lokhu kubaluleke kakhulu, ngoba ngokusho komthetho odumile we-Pareto, imizamo engu-20% kuphela inika u-80% womphumela. Uma uhlanganisa ukuzijabulisa emsebenzini - ukusebenza kahle kwamaphupho akho kuzodlula konke okulindelwe! Isibonelo, iphupho lokuba lihle kakhulu futhi lithembele kulula ukwenza uma uzungezile nabalingani obuhle kakhulu. Phakathi kwazo - isimo sengqondo esivela ekuseni, izimonyo ezihambisana nesikhumba sakho esincane, izingubo eziphathekayo ezigcizelela isibalo esihle nemilenze emihle eyoba ngubonga obushelelezayo ngokuthinta okuthandekayo kwe-Venus Embrace. Ngokuqinisekile uzothanda umbala obubende obomvu walesi sici. Ama-blade awo amahlanu amancane, azungezwe i-riboni ukuze abe slip engcono, ayesondelene kakhulu nesikhumba sakho, kalula futhi asuse ngokushesha izinwele ezengeziwe futhi enze kube lula ngokushelela. Futhi ngenqubo yokuletha injabulo enkulu, sebenzisa i-gel elimnandi isikhumba se-Satin Care Lavender Kiss "Kiss of lavender." Ungakhathazeki ngalutho - nje ujabulele zonke izinyathelo ekuphupheni kwakho ukuba ngowesifazane oletha injabulo!
Qaphela omunye umthetho olula wowesifazane: okokuqala wenza umzamo omncane, ukuletha iphupho lakho eduze, futhi ngokuthokozisa uyawubonga umphumela wezimpumelelo. Futhi ukuthi umsebenzi ephusheni uyasuswa, uthathe njengendlela yokudumisa. Njengombhobho wamafutha, nokudumisa ngokwakho ngeke kuphazamise. Kuzo zonke ukunqoba - ezinkulu noma ezincane - ziqhenye ngomphumela wakho futhi uzibeke ngezipho. Umhlobiso omuhle noma indebe yetiyi elimnandi kwi-cafe yakho oyintandokazi - lezi zipho ezimnandi kowesifazane uzongeza imibala ezinsukwini zakho zasentwasahlobo. Yabelana ngempumelelo yakho nabangani noma abathandekayo - faka emifuleni yokufudumala kwabo, njengokushisa! Yebo, nokuningi elangeni, ngoba imisebe ekhanyayo isiza umzimba wakho ukuba ugcwalise amahomoni enhle. Futhi-ke, imvelo iyamemeza: "Iphupho, yeka ukuthi inhliziyo yakho ifisa kangakanani!"
Ungazibeka kanjani ukuze uthole uNyaka Omusha
Ubusika - ubuhle akusona isithiyo!
Indlela yokukhetha ispirisi engadini efanele
I-Moussa Project Showroom - Ukunciphisa Phakathi Kwezifiso Namathuba
Utamatisi oluhlaza okheniwe
Ama-apula ebusika - zokupheka kanye namalungiselelo ezimbiza ezi-3-litre: uhlanganise, amazambane ahlambulukile, ama-sugar, ama-lobules. Ukugcina ama-apula ebusika ekhaya
Izimbangela zekhanda elibi kakhulu
Yini amadoda ayakwazisa kwabesifazane?
I-Nutmeg: izakhiwo eziwusizo
Ungasusa kanjani ukuvuvukala emehlweni ezinyembezi? Amathiphu awusizo